အမျိုးသားထုကြီးရဲ့ နှလုံးသားကို ကိုင်လှုပ်လိုက်ပြန်တဲ့ ခေးကြီးလုရဲ့ အရမ်းမိုက်တဲ့ ဗီဒီယိုလေး – Shwe Ba
Homepage / Cele News / အမျိုးသားထုကြီးရဲ့ နှလုံးသားကို ကိုင်လှုပ်လိုက်ပြန်တဲ့ ခေးကြီးလုရဲ့ အရမ်းမိုက်တဲ့ ဗီဒီယိုလေး
အမျိုးသားထုကြီးရဲ့ နှလုံးသားကို ကိုင်လှုပ်လိုက်ပြန်တဲ့ ခေးကြီးလုရဲ့ အရမ်းမိုက်တဲ့ ဗီဒီယိုလေး
မော်ဒယ်လ် လုလုအောင် က တော့ ကချင် တိုင်းရင်း သူလေး တစ်ဦး ဖြစ်ပြီး မြင်သူ ငေး ရလောက် တဲ့ အလှ တရားတွေ ကို ပိုင်ဆိုင် ထား တာ ဖြစ်ပါ တယ် … ။ အခုလည်း လုလုအောင် က အခွီ တလိုင်း ပုံစံ နဲ့ ပျော်ပျော် ပါးပါး Tik Tok ကစား ထားတဲ့ ဗီဒီယို လေးကို တင်ထား တာ ဖြစ်ပါ တယ် … ။ ဒီဗီဒီယို လေး မှာတော့ လုလုအောင် တစ် ယောက် သီချင်းသံ ကြောင့် အပြင်ထွက် ရမလို ၊ အိမ်ထဲပြန် ဝင်ရမလို ဖြစ်နေတဲ့ ပုံစံလေး မျိုး သရုပ်ဆောင် ထားတာ ဖြစ် ပါ တယ် … ။
လုလုအောင် က ရုပ်ရည် ချောမော လှပတဲ့ အပြင် သွယ်လျ လှပတဲ့ ခန္ဓာကိုယ် အချိုးအစား ကို လည်း ပိုင်ဆိုင် ထားတာ ဖြစ် ပါ တယ် … ။ ဒါ့အပြင် လုလုအောင် က ကလေး တစ်ယောက် အမေ လို့ မထင်ရ လောက်အောင် အရွယ် တင် နုပျိုပြီး လှသွေး ကြွယ် နေတာ ဖြစ် ပါ တယ် … ။ ပရိသတ် တွေ အတွက် လုလုအောင် ရဲ့ အမိုက် စား Tik Tok ဗီဒီယို လေး ကို ပြန်လည် မျှဝေပေး လိုက်ပါ တယ် နော် … ။
လုလုအောင် က သီချင်း ဗီဒီယိုလေး တွေ နဲ့ ကြော်ငြာ တွေ မှာ ပါဝင် သရုပ်ဆောင် ခဲ့ ပြီး အနုပညာ အလုပ် တွေကို လုပ်ကိုင် ခဲ့တာ ဖြစ်ပါ တယ် … ။ Photo Shooting လေး တွေ လည်း ရိုက်ကူး လေ့ရှိ တဲ့ လုလုအောင် က ပရိသတ်တွေ အားပေးမှု ကို ပိုပိုပြီး ရရှိ နေတာပဲ ဖြစ် ပါ တယ် … ။ လတ်တ လော မှာ တော့ လုလုအောင် က အိမ်မှာ နေရင်း အမိုက်စား အပျော် တမ်း Tik Tok video လေး တွေ ရိုက်ကူး နေတာ ဖြစ်ပါ တယ် နော် … .
source & video credit : Lulu Aung ’ s fb page
ေမာ္ဒယ္လ္ လုလုေအာင္ က ေတာ့ ကခ်င္ တိုင္းရင္း သူေလး တစ္ဦး ျဖစ္ၿပီး ျမင္သူ ေငး ရေလာက္ တဲ့ အလွ တရားေတြ ကို ပိုင္ဆိုင္ ထား တာ ျဖစ္ပါ တယ္ … ။ အခုလည္း လုလုေအာင္ က အခြီ တလိုင္း ပုံစံ နဲ႔ ေပ်ာ္ေပ်ာ္ ပါးပါး Tik Tok ကစား ထားတဲ့ ဗီဒီယို ေလးကို တင္ထား တာ ျဖစ္ပါ တယ္ … ။ ဒီဗီဒီယို ေလး မွာေတာ့ လုလုေအာင္ တစ္ ေယာက္ သီခ်င္းသံ ေၾကာင့္ အျပင္ထြက္ ရမလို ၊ အိမ္ထဲျပန္ ဝင္ရမလို ျဖစ္ေနတဲ့ ပုံစံေလး မ်ိဳး သ႐ုပ္ေဆာင္ ထားတာ ျဖစ္ ပါ တယ္ … ။
လုလုေအာင္ က ႐ုပ္ရည္ ေခ်ာေမာ လွပတဲ့ အျပင္ သြယ္လ် လွပတဲ့ ခႏၶာကိုယ္ အခ်ိဳးအစား ကို လည္း ပိုင္ဆိုင္ ထားတာ ျဖစ္ ပါ တယ္ … ။ ဒါ့အျပင္ လုလုေအာင္ က ကေလး တစ္ေယာက္ အေမ လို႔ မထင္ရ ေလာက္ေအာင္ အရြယ္ တင္ ႏုပ်ိဳၿပီး လွေသြး ႂကြယ္ ေနတာ ျဖစ္ ပါ တယ္ … ။ ပရိသတ္ ေတြ အတြက္ လုလုေအာင္ ရဲ့ အမိုက္ စား Tik Tok ဗီဒီယို ေလး ကို ျပန္လည္ မၽွေဝေပး လိုက္ပါ တယ္ ေနာ္ … ။
လုလုေအာင္ က သီခ်င္း ဗီဒီယိုေလး ေတြ နဲ႔ ေၾကာ္ျငာ ေတြ မွာ ပါဝင္ သ႐ုပ္ေဆာင္ ခဲ့ ၿပီး အႏုပညာ အလုပ္ ေတြကို လုပ္ကိုင္ ခဲ့တာ ျဖစ္ပါ တယ္ … ။ Photo Shooting ေလး ေတြ လည္း ရိုက္ကူး ေလ့ရွိ တဲ့ လုလုေအာင္ က ပရိသတ္ေတြ အားေပးမႈ ကို ပိုပိုၿပီး ရရွိ ေနတာပဲ ျဖစ္ ပါ တယ္ … ။ လတ္တ ေလာ မွာ ေတာ့ လုလုေအာင္ က အိမ္မွာ ေနရင္း အမိုက္စား အေပ်ာ္ တမ္း Tik Tok video ေလး ေတြ ရိုက္ကူး ေနတာ ျဖစ္ပါ တယ္ ေနာ္ … .
Previous post တောင့်တင်းလှတဲ့ ခန္ဓာကိုယ်လေးကို အထင်းသားပေါ်အောင် ချပြလိုက်တဲ့ မတ်မတ်အေးသောင်းရဲ့ အမိုက်စား ဗီဒီယိုလေး
Next post အသဲယားစရာ အမူအယာလေးနဲ့ အရမ်းကိုရင်ခုန်စရာကောင်းလွန်းနေတဲ့ ရွှေဘုံလေးရဲ့ ခပ်မိုက်မိုက် ဗီဒီယိုလေး